यसरी रहस्य खुल्यो दिपीका र दिवाकरको प्रेमसम्बन्ध ! – Everest Dainik – News from Nepal
यसरी रहस्य खुल्यो दिपीका र दिवाकरको प्रेमसम्बन्ध !
केही महिनाअघि नेपाली चलचित्र ‘ऐश्वर्य’ निर्देशक दीवाकर भट्टराई र अभिनेत्री दीपिका प्रसाईँको प्रेम सम्बन्धमा रहेको खुलासामा आएको छ ।
यो कुरालाई दुवैले नकार्दै आएपनि दीपावलीको छेकोमा अन्ततः यो सत्य प्रमाणित भएको छ ।
दुवैले प्रेम स्वीकार गरेका छन् । प्रेममा मात्र नभई उनीहरुले इन्गेजमेन्ट समेत गरिसकेका छन् । इन्गेजमेन्ट केही हप्ता अगाडिमात्र भएको हो । निर्देशक भट्टराईले विवाह भने मंसिरपछि मात्र हुने बताए । उनले समाचार प्रकाशन हुँदा आफूहरु अफेयरमा रहेको पनि बोले ।
दीपिकालाई दीवाकरले नै फिल्म क्षेत्रमा ल्याएका हुन् । अहिले दीपिका अभिनीत नयाँ नेपाली सुपरहिट चलचित्र ‘छक्का पञ्जा ३’ प्रदर्शन भइरहेको छ । दीवाकर निर्देशित नयाँ फिल्म ‘क्याप्टेन’ शिवरात्रीको छेकोमा रिलिज हुँदैछ, जसमा अनमोल केसी लिड रोलमा छन् । दीपिका र दीवाकर ‘ऐश्वर्य’ को सेटबाट एकअर्कासँग नजिक भएका हुन् ।
दुवैले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा एकअर्काको अंगालोमा बाँधिएको तस्वीर राख्दै प्रेममा रहेको कुरालाई पुष्टि गरेका हुन्। दीपिकाले तस्वीरसँगै क्याप्सनमा लेखेकी छन्, ‘र उनी मेरो लागि सँधै ।’ दीवाकरले पनि उनकै क्याप्सन कपी गरेका छन्। दुबैले एकै समयमा तस्वीर फेसबुकमा शेयर गरेका हुन् ।